Home » Vaovao momba ny indostria fihaonana » Reykjavík dia handray ny hetsika esports roa lehibe indrindra amin'ny taona
Sehatry ny fanatanjahantena anaty trano an'i Reykjavík's Laugardalshöll
Tanàna dimy ambin'ny folo no nifaninana tamina fizotran'ny tolo-kevitra fohy nefa feno, izay nifaranana tamin'ny tolo-kevitra nandresen'i Reykjavík
Reykjavík dia hampiantrano ny ligin'ny ligin'ny lisitry ny vanim-potoana manasa-mahavory ligy sy mavitrika Champions League
Ny fifaninanana amin'ireo hetsika roa dia hitranga ao amin'ny kianjan'ny fanatanjahantena anaty trano Laugardalshöll ao Reykjavík
Ny fotodrafitrasa haingam-pandeha, azo itokisana, manara-penitra ao Reykjavík dia mety indrindra amin'ireo hetsika ireo
Riot Games, mpamorona ary mpanonta ny League of Legends ary VALORANT, dia nanambara fa ny roa amin'ireo hetsika esports manandanja indrindra dia hitranga any Reykjavík amin'ity volana Mey ity. Ny fifaninanana amin'ireo hetsika roa dia hitranga ao amin'ny kianjan'ny fanatanjahantena anaty trano Laugardalshöll ao Reykjavík. Sambany, ny Lalao Riot dia tsy mitondra afa-tsy iray amin'ireo fifaninanana esports tsara indrindra ho an'i Islandy.
Tanàna dimy ambin'ny folo no nifaninana tamina fizotran'ny tolo-kevitra fohy nefa feno, izay nifaranana tamin'ny tolo-kevitra nandresen'i Reykjavík.
"Faly izahay mampiseho ny fifaninanana Riot esports avo lenta amin'ny firenena mahavariana sy tokana toa an'i Islandy, manasongadina fa ny fitiavam-pitiavam-pitondrana anay dia hita isaky ny vazan-tany," hoy i John Needham, Global Head of Esports for Riot Games .
Mivory ao Reykjavík, ny Birao fivoriambe ofisialy ho an'ny tanànan'ny Reykjavík sy Islandy, no mitarika ny fizotrany. "Misy zavatra telo heverinay fa nampisy fahasamihafana lehibe tamin'ny fahazoana io tolotra io," hoy i Sigurður Valur Sigurðsson, Talen'ny Marketing ao amin'ny Meet in Reykjavík. “Ny laharana voalohany dia ny fanekena ny fahombiazan'ny Islandy tamin'ny fanalefahana ny fiantraikan'ny COVID-19. Ny laharana faharoa dia ny lohataona mahafinaritra nomen'ny tanàna hetsika eran-tany amin'ny fahitalavitra. Farany, ny fotodrafitrasa haingana sy azo itokisana ary manara-penitra ao Reykjavík dia mety indrindra amin'ireo hetsika ireo. ”
Hanomboka ny alakamisy 19 mey izao ny ligin'ny ligin'ny Mid-Season Invitational (MSI), izay nofoanana tamin'ny taon-dasa noho ny COVID-6, ary hifarana amin'ny famaranana ny alahady may may ny fifaninanana eo amin'ny ekipa 12 ambony avy amin'ny ligim-paritra. 23. MSI koa dia iray amin'ireo hetsika lehibe indrindra isan-taona League kalandrie esport.
Hanomboka ny alatsinainy 24 mey ho avy izao ny valiny ho an'ny Tompondakan'ny Tompondakan'ny VALORANT (VCT) Masters Reykjavík, ity fitsidihana ity no hetsika VALORANT voalohany manangona ireo ekipa folo voalohany amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena mivantana. Izy rehetra dia hiady toerana iray amin'ny tompon-daka VALORANT amin'ny faran'ity taona ity. Ny VCT Masters Reykjavík dia hofaranana amin'ny fampisehoana iray izay kasaina hatao ny alahady 30 may ho avy izao.
American Airlines sy Travelport dia manitatra ny fifanarahana atiny feno